Nagarik News - कुस्त कमाउने फिल्म कसरी बनाउने?
24 Apr 2016 | 10:41am
काठमाडौंको सुन्धारास्थित क्युएफएक्समा बिहीबार दिउँसो हलिउड फिल्म 'द जंगल बुक'को सो हेर्ने दर्शक आश्चर्यजनक रुपमा बढी थिए। फिल्मी भाषामा सोमबारदेखि बिहीबारसम्म सरकारी बिदा परेन भने त्यसलाई 'सुख्खा दिन' मानिन्छ। यस्तोमा आधाभन्दा बढी सिट भरिनु सुखद् पक्ष हो। तर हलिउडले जान्दछ, सुख्खा याममा समेत कसरी दर्शक बटुल्ने!
'द जंगल बुक'ले पहिलो दिन नै संसारभरिबाट २९ करोड डलर भेला पार्योस। अमेरिकाबाट मात्रै १० शुद्ध लगानी गर्दाको रकम उठायो। आखिर अकुत सम्पत्ति संसारभरबाट उठाउने फिल्म कसरी बनाइन्छ?
हलिउडको सूत्र छ, दर्शकलाई त्यो देखाउनुस्– जुन उनीहरूले कहिल्यै नदेखेका होऊन्! झन् त्यसमा डिज्नेजस्तो प्रख्यात निर्माता जोडिएपछि अद्भूत कुरा देखिने नै भए। आश्चर्य चाहिँ 'द जंगल बुक'जस्तो बच्चाबच्चालाई थाहा भएको परिचित कथामा दर्शकलाई लोभ्याउन सक्नु हो।
४१ वर्षकै उमेरमा नोबेल साहित्य पुरस्कार पाउने उपन्यासकार रुडयार्ड किप्लिङले १८९४ मा प्रकाशित गरेको यो लघुउपन्यासलाई बारम्बार ठूलो र सानो पर्दामा दोहन गरिएको छ। डिज्नेले नै १९६७ मा एनिमेटेड फिल्म बनाइसकेको कथालाई उन्नत प्रविधि उपयोग गर्दै 'पैसा उमार्ने मेसिन' बनाइएको छ।
सिनेमाका हिरो मोग्ली होलान् भन्ने ठान्नु भयो भने तपाईं भुलमा हुनुहुन्छ किनभने पर्दामा जीवन्त चरित्र ल्याउने हिरो यसका निर्देशक हुन्। अमेरिकी–इटालेली यहुदी जोन फेभरुले यसअघि 'आइरन म्यान'का दुई शृंखला निर्देशन गरेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाइसकेका थिए। यस पटक भने फिल्म समीक्षक उनीबाट अलि बढी खुसी देखिए किनभने समीक्षकहरूको समूहले उनको यो फिल्म उनका अघिल्ला फिल्मभन्दा उम्दा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कमेडियन हुने सपना पालेका उनी निर्देशकका रुपमा बढी जमे। उनको अर्को एउटा विशेषता चाहिँ कम बजेटको 'स्विङ्गर' (२ लाख डलर) बनाएर वाहवाही बटुल्नु र 'जंगलबुक'जस्तो महँगो फिल्ममा पनि जम्नु हो। त्यसो त उनको कामको सधैं प्रशंसा मात्र भएको छैन, 'काउ ब्वाइज एन्ड एलियन्स'जस्तो वाहियात फिल्म बनाएकोमा चर्को आलोचनासमेत झेलिसकेका छन्। तथापि यो फिल्ममार्फत् उनले आफ्ना सबै अघिल्ला असफलताबाट मोचित भएका छन्।
फिल्मलाई यसरी बेच्ने
न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाका अनुसार फिल्म राम्रो मात्र भएर हुँदैन। त्यसलाई संसारभर बेच्न गतिलो बजार व्यवस्थापनको योजनासमेत हुनुपर्छ। डिज्नेले फिल्म बेच्न गतिलो योजना बनाएर बेचेकाले (प्रायः हलिउडका ठूला स्टुडियोहरूले फिल्मभन्दा योजना नै बेच्छन्, कहिलेकाहीँ राम्रो फिल्म पर्नु बेग्लै कुरा हो!) अपेक्षित सफलता पाएको हो।
प्रशंसकको भिड बटुल्नुस्
डिज्नेले बनाएका कयौं चरित्रहरू कार्टुन, सुपरहिरो, हिरोहरूका संसारभर लाखौं प्रशंसक छन्। ती प्रशंसकहरूलाई आफ्नो वरिपरि घुमाइरहन डिज्नेले हरेक वर्ष 'प्रशंसक सम्मेलन' गर्दछ। पोहोर भदौमै त्यस्तो सम्मेलन हुँदा फिल्मका झलक मात्र देखाइएन, मोग्ली (नील सेठी) को पहिलो दर्शन गराइयो। (यी मोग्लीलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन)। प्रशंसक सम्मेलन सकिइसक्दा सोसल साइटहरूमा 'जंगलबुक'को चर्को प्रशंसा भइसकेको थियो।
नयाँ जमानाका युवालाई भेट्नुस्
निर्देशक फेभरुले डिज्नेको मात्र भर नपरी केही ब्लगरसँग भेटे र फिल्म निर्माणका गुह्य कुरा खुलाए। ती ब्लगर २१ औं शताब्दीका नयाँ फिल्म समीक्षकसमेत हुन्। तिनलाई प्रविधिमा गहिरो रुचि छ र तिनका बेग्लै पाठक छन्। ती ब्लगरका कुरा संसारभर सुनिन्छन्। यस्तो अवस्थामा फेभरुले फिल्म बनाउँदा प्रयोग गरिएका नवीनतम प्रविधि, बघिरा, का र बलुलाई कम्प्युटरमा बनाउँदाका रोचक पक्षहरूसमेत बाँडे। यसले प्रविधिपुस्तालाई फिल्मप्रति ह्वात्तै रुचि जगायो।
बच्चालाई मात्र होइन
जंगलबुक भन्नेबित्तिकै बच्चाहरूलाई देखाउने र सुनाइने कथा हो भन्ने भान नपार्न घगडान कलाकारको स्वर भरियो। बघिरामा बेन किंग्सले, शेरखानका रुपमा इद्रिस एल्बाजस्ता आवाजले सिनेमा हलमा वयस्क दर्शकसमेत तानिने आँकलन थियो। यति मात्र होइन, दर्शक तान्न खेलकुद मात्र प्रसारण गर्ने इएसपिएन च्यानलमा फिल्मका रोचक भिडन्त मात्र देखाइयो।
त्यसमाथि थि्रडी हलहरूमा स्टार वार्सको नयाँ शृंखला 'द फोर्स अवेकेन्स' रिलिजका अवसरमा यसको विज्ञापन प्रसारण गरियो। स्टार वार्सका दर्शक ५८Ü पुरुष थिए। यसले दर्शकलाई सन्देश दियो– फिल्ममा तिम्रा लागि पनि हेर्न लायक केही छ है!
अंग्रेजीबाहेक अन्य दर्शक समेट्ने
भारतमा हिन्दीबाहेक तमिल र तेलुगु भाषी दर्शक निकै छन्। तिनका लागि धेरै वर्षअघिदेखि 'डब' गरेर अंग्रेजी फिल्म रिलिज गर्न थालेको धेरै भइसक्यो तर यस पटक डिज्नेले स्पेनी भाषामा 'डब' गरेर नयाँ बाटो खोल्यो। दक्षिण अमेरिकी (हिस्पानी)ले बोल्ने भाषा स्पेनिस हो र हिस्पानी प्रायः हुलका हुल फिल्म हेर्न जाने हालै गरिएको एउटा सर्भेले देखाएका कारण फिल्मलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा डब गरियो।
भारतमै पनि ठूलो दर्शक तान्न 'द जंगल बुक'को एनिमेटेड शृंखलाको चर्चित गीत 'जंगल जंगल पता चला है...'लाई उपयोग गरिएको थियो। विशाल भारद्वाजले संगीत दिएको र गुलजारले लेखेका शब्दलाई यस पटक डिज्ने इन्डियाले राम्रो उपयोग गरेको थियो। यसले बाल्यकालमा हेरेको यो शृंखलाको स्मरण ताजा भएर आउने र हलसम्म तानिने उनीहरूको अपेक्षा थियो। अपेक्षा सफल पनि भयो किनभने फिल्मले विश्वभरबाट २० करोड डलर एकै दिनमा संकलन गर्योू।
थ्रीडीको अतिरिक्त कमाइ
सामान्य फिल्मको टिकटदर र थि्रडीको फरक हुन्छ। नेपालमा १ सय रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्छ। अमेरिकामा सामान्य टिकट दर ३ डलर छ भने थि्रडीको ५ डलर। प्रति टिकट थप दुई डलर कमाउने लोभमा पछिल्लो समय हलिउडका फिल्महरू प्रायः थि्रडीमा नै रिलिज गरिन्छन्। यो अवसर डिज्नेले 'द जंगल बुक'मा कसरी गुमाउन सक्थ्यो र?
अब त कसरी फिल्म बेच्ने बुझ्नु भयो होला! फेरि पनि कहाँ हलिउड र कहाँ... भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अंग्रेजीको एउटा प्रख्यात भनाइ बिर्सनु भएजस्तो छ, 'ट्राइ ट्राइ, अन्टिल यु डाइ!'
« फ्रेन्च फिल्मका कलाकार नेपालमा नमस्ते गर्न सिक्दै